विप्लवलाई हाेइन आफ्नै नेतालाई प्रश्न सोध्ने आँट गर्नुहोस् रामदिप दाई — Sanchar Kendra
रामदीप दाइ, हिजो साँझ एउटा अनलाइनमा तपाईले नेकपा महासचिव विप्लवलाई लेखेको पत्र पढ्ने अवसर मिल्यो । सुरुमा म दुबिधामा परेँ- लेखक तपाई नै हो कि तपाइको नाम गरेको अरु कोही हो भनेर । पत्र (लेख) को अन्तिममा नेकपा केन्द्रीय सदस्य भनेर उल्लेख गरिएको देखेपछि मेरो दिमागभित्र सम्झनाको रिल घुम्यो ।
प्रिय दाइ, पालुङटारको जस्तै नेतृत्वको ‘चाकडी’ गर्न खोज्नुभएको हो भने शुभकामना छ । हाेइन भने यो कसरी मेल खान्छ ? कुनै बेला जनयुद्धमा बगेको रगतलाई रजस्वलाको रगतसँग तुलना गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठहरु आज कहाँ के गर्दैछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । सामान्य भाषामा भनौं- द्वन्द्व किन हुन्छ- असमझदारी र विवाद बढेपछि । राजनीतिक विवाद किन बढ्छ- वैचारिक दृष्टिकोणमा ग्याप बढेपछि । सामाजिक विवाद किन बढ्छ- अन्याय र असमानता बढेपछि होला । त्यसैले व्यवस्थित राजनीतिक पद्धति र समतामूलक सामाजिक न्यायको उपस्थिति रहेको बेला द्वन्द्व हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । विप्लवले वा अरु कसैले चाहदैमा युद्ध, आन्दोलन भइहाल्दैन ।
मार्क्स, लेनिन, माओका रचनाहरु तपाईले जति धेरै पढेको छैन । र, विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न ब्यक्तिले भनेका कुरा साभार गर्नतिर पनि नलागौं होला । बरु भन्नुहोस् कि आजको नेपालमा शान्ति बिरोधि को हो ? त्यसभन्दा पहिले २०५२ सालमा शान्तिबिरोधि को थियो- माओवादी कि सरकार ? ल ठिकै छ ०७० सालको दोस्रो सविधानसभा निर्वाचनताका तपाईकै निर्देशन काठमाडौमा दर्जनौं बम पड्किएका कुरा पनि भुलिदिउँ । विप्लवले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनाएपछिको मात्रै हिसाब निकाल्नुहोस् ।
विप्लवको पार्टीले अशान्ति मच्चायो कि सरकारले ? लोकतन्त्रको परिभाषा के हो ? कसैले कुनै कुरा मान्छु भन्ने पाउँछ भने अर्कोले मान्दिन भन्न पनि पाउँछ । ठिक छ भन्नू लोकतन्त्र हो भने ठिक छैन भन्नू पनि लोकतन्त्र होला नि । चुनावमा भोट हाल्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो भने भोट हाल्दिन भन्नू पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो । गत सालको स्थानीय चुनावमा विप्लवका नेता-कार्यकर्ता, समर्थकहरुमाथि कसरी ज्यादती भयो ? तपाईलाई थाहा हुनैपर्छ ।
अस्पतालबाट मानिसहरु समातिए । क्रियास्थलबाट मान्छेहरु गिरफ्तार गरिए । घरमा सुतिरहेका मान्छेहरु प्रहरी हिरासतमा ब्यूझिए, सुत्केरी र बच्चामा आमाहरू समेत गिरफ्तारीमा परे । यो सबका पछाडि एउटै कारण छ कि उनीहरुले चुनावमा मतदान नगर्ने सोच बनाएका थिए । ‘बम’ त चुनावी मिति नजिकिएपछि मात्रै पड्किएका खबर आएका हाेइनन र ? कालिकोटको माल्कोटमा धनरुप बटालाको हत्या कसको गोलीबाट भएकाे हाे ? अनि त्यहाँ विवाद र झडपको स्थिति के र कसका कारण सिर्जना भएकाे थियो ? मन्त्री समेत भैसकेका प्रकाण्डलाई राजनीतिक गिरफ्तारीमा कसरी यातना दिइयो ? अरु टाढा जानै पर्दैन ।
पछिल्लाे समय कपिलवस्तुकाे शिवगढीमा घरबाटै पक्राउ गरेर लगिएका दुर्गा राेकालाई प्रहरी चाैकी पुर्याइसकेपछि शौचालयमा लगेर गोली हानियाे । सरकारको जयजयकार गर्नेहरुकै बराबर नभए पनि न्यूनतम मानवअधिकार र मौलिक अधिकार हरेक नेपाली नागरिकको हुन्छ कि हुँदैन ? यी र यस्ता प्रश्नबारे सोच्नुहोस् र तपाइको पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई सोधिदिनुहोस् ।
तपाई स्वयंले पनि बहिस्कार गरेको र गर्न लगाएको संविधानसभाबाट निर्मित संविधान फेरि एकपटक पढ्नुहोस र तपाईका नेताहरूलाई सुनाइदिनुहोस्- राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा तपाईहरुले नै बनाएको संविधानको मर्म विपरित छ भनेर । ‘सेबोटेज’को विषयमा पनि भ्रममुक्त हुनुहोस् । प्रकाण्डको डायरीमा अस्पष्ट र अमूर्त रुपमा लेखिएको भनिएको पुरानो सन्दर्भको कुरालाई लिएर नेताहरुलाई नतर्सिन भन्नुहोस् ।
अर्को कुरा, प्रकाण्डको डायरी भेटिएको साउनमा अनि प्रचण्डमाथि सुरक्षा खतरा चाहिँ फागुनमा आएर मात्रै महशुस हुनुपर्ने ? त्यसैमा पनि अमेरिका उड्ने मिति नजिक आएपछि प्रचण्डले विप्लवले आफ्नो हत्या गर्ने योजना बनाएको भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने ? प्रचण्डले विगतदेखि नै पटक पटक आफूलाइ हत्या गर्ने षड्यन्त्र भइरहेकाे भन्दै कुर्लिने गरिरहेका छन तर ती कुनै पनि कुराकाे स्वतन्त्र पुष्टि भएकाे छैन ।
एकछिन मानिलिउँ प्रकाण्डको डायरीमा कसैको हत्या गर्ने योजना भेटिएको भए उतिबेला नै उक्त पार्टीमाथि थप कारबाही र प्रतिबन्ध लगाउने कुरा आउथे होलान् । उतिबेला गिरफ्तार नेताकार्यकर्ता धमाधम छोड्ने अनि आज आएर त्यहीँ डायरीको कुरा देखाएर दुनियाँलाई भ्रमित पार्न खोज्ने कुरा कसरी मेल खान्छ ? ज्योतिषकाे भबिस्यवाणी जसरी २०७६ सालमा कसैको हत्या गर्ने भनेर पक्कै पनि डायरीमा लेखेको थिएन होला । यो सबै कुरा त एउटा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्छ ।